တရုတ် Richina - Poly Blade ကိုအတူ Ergonomics နှင်း Pusher
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H431
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 280mm 431
Ergonomics နှင်း Pusher
ကို C ကွေးလက်ကိုင်ဆီးနှင်း pusher
4 မျိုး နှင်းရေမှုတ်များ နှင့် pusher အကြီးအကဲများအတူတူလက်ကိုင်သုံးလို့ရတယ်
မိုဃ်းပွင့် pusher ခြုံငုံအရှည် 1300mm
PC ကွန်ပျူတာ / PP ဓါး, size431 * 280mm
Dia28 * 36mm Ergonomics လူမီနီယံလက်ကိုင်
snap-သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက် Blade ကိုနှင့်ကိုင်တွယ်
PP ဓါးအဘို့တန်ခိုးနှင့် tool ကိုဘဝဖြတ်တောက်အကြမ်းခံသတ္တုအစွန်းတိုး
စံပြကွေးရှာဖွေနေကိုင်တွယ် နှင်း Pusher ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် နှင်း Pusher Ebay are quality guaranteed. We are China Origin Factory of Snow Pusher Shovel. If you have any question, please feel free to contact us.
Adjustab နှင့်အတူအသက် 30 လက်မအရွယ် Utility ကိုအားကစားနှင်းရေမှုတ်များ ...